Umboniso weGenghis Khan | IMongol Warrior
Umkhosi waseMongolia kwi-pony yakhe, ekhutshwe ngezixhobo kunye nokubonisa izixhobo ezikhuselekileyo kunye nekhuselo. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Umkhosi waseMongol ovela kwi-museum yaseGenghis Khan.
Ukhwela ihashe eliqhelekileyo nelinxinxantye laseMongolia kwaye uthwala isaphetha kunye nomkhonto. Iqhawe liphinde limbethe iinqwelo eziqinisekileyo, kubandakanywa nesigqoko esinomphefumlo we-horsetail, kunye nekhwele.
Ifoto yomnyango weGenghis Khan, iMyuziyamu yeNzululwazi nezeNdalo. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Ukuqala kohambo ukuya kwimbali yaseMongolia, kubonisa ubungakanani bombuso waseGenghis Khan kunye nexesha lokulwa kwama-Mongol.
Umama waseMongolia | Umboniso weGenghis Khan
Ummongo waseMongol ovela kwi-museum yaseGenghis Khan. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Umama womfazi waseMongolia ukusuka kwi-13 okanye ye-14 leminyaka, kunye nempahla yakhe engcwabeni. Umama ugqoke izibhathane zesikhumba. Unomsila omhle, amacici, kunye neenwele zeenwele, phakathi kwezinye izinto.
Abafazi baseMongolia babenomgangatho ophezulu kuluntu lwabo phantsi kweGenghis Khan. Baye bathatha inxaxheba ekuthathweni kwezigqibo kuluntu, kwaye iKhanti enkulu yenza imithetho ethile ukukhusela ekuthunjweni kunye nezinye izigwenxa.
Ibhokisi leCoffin yaseMongolia
Ibhokisi likaMongameli waseMongolia. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Ibhokisi leenkuni kunye nekhumba ye-13 okanye yekhulu le-14 leminyaka leMongoliakazi (sibone isithombe esingaphambi komama wakhe).
Umama wangaphakathi wayegqoke iingubo zombini zengubo zobumba, kunye nezambatho zangaphandle zesikhumba. Wangcwatyelwa kunye nezinto ezithile eziqhelekileyo - isitya kunye nesitya - kunye nezinto ezinokuzithengisa ezifana neengubo.
I-shaman yaseMongolia eneendwangu ezicacileyo kunye nengqungquthela, i-Genghis Khan ibonisa. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Esi sambatho sakwa-shaman kunye nengqungquthela zivela kwixesha leshumi elinesithoba okanye ekuqaleni kwekhulu leminyaka.
I-shaman's-cover cover includes foworks and earring metal. UGenghis Khan ngokwakhe walandela izinkolelo zonqulo zaseMongolia, eziquka ukuhlonishwa kweBlue Sky okanye iLizwe elingunaphakade.
I-Grasslands kunye neYurt
Iintlobo zeGrasslands Kuboniswe kwiNgqungquthela yaseGenghis Khan, kuquka i-yurt kunye nemigangatho yokutya. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Iziqithi zaseMongolia okanye i-steppe, kunye ne-inside yurt eqhelekileyo.
I-yurt yenziwe ngesakhelo somthi osikiweyo kunye nokuziva okanye ukufihla. Yomelele kwaye ifudumele ngokwaneleyo ukuze imelane nobusika obushushu baseMongolia, kodwa kusenokuba lula ukuthabatha nokuhamba.
Abantu baseMongolia bezitshatsheli babeza kudibanisa ii-yurts zabo baze bazilayishe kwiinqwelo ezimbini zokuhamba ngehashe xa kwakukho ixesha lokuhamba ngamaxesha.
Iinkcukacha zengqungquthela yaseMongolia evela kwi-museum yaseGenghis Khan. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
I- cross Mongolian bowbow bowbow , esetyenziselwa ukuhlaselwa ngabakhuseli beedolophu ezinqatyelweyo.
Amagutho aseGenghis Khan ahlonipha ubuchule bawo bokungqinga kwiidolophu eziqingqiweyo zaseTshayina waza wasebenzisa ezi zakhono kwiidolophu zonke kwi-Central Asia, eMpuma Yurophu naseMiddle East.
I-Trebuchet, i-Mongolian Siege Machine
I-trebuchet yaseMongolia, uhlobo olusisigxina lokumisa umbane olusetyenziswa ngumkhosi wakwaGenghis Khan ukuhlasela izixeko eziphambili. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
I-trebuchet, uhlobo lomshini wokungqinga, esetyenziselwa ukuphosa imirhubhe phezu kweendonga zeedolophu ezinqatywe. Umkhosi waseMongolia phantsi kweGenghis Khan kunye nenzala yakhe basebenzisa olu matshini olunqamlekileyo lokungqinga ukuhamba ngokulula.
Imfazwe yaseMongolia yayingqineka kakhulu. Bathabatha iidolophu ezifana neBeijing, iAleppo neBukhara. Abemi basezidolophini ezanikela ngaphandle kwemfazwe basindiswa, kodwa abo babenqabile ngokuqhelekileyo babulawa.
Xhosa Shamanist Dancer
Umdanisi waseMongoli owenza umboniso waseGenghis Khan kwiMyuziyam yoLwazi lweNzululwazi kunye neNdalo yaseDenver. Batsaikhan Munkhsaikhan / Dino Don Inc.
Ifoto yomdlali weMongolia owenza "kwiGenghis Khan kunye noMongameli waseMongol " kubonisa kwiMyuziyam yaseDenver yeNdalo neNzululwazi.
I-Sui Dynasty Abalawuli baseChina
Ukufa kukaCatherine oMkhulu: Ukukhwabanisa inkolelo yamahhashi
IsiFulentshi seNguqulelo yesiHlomelo: Imvelaphi ngaphambi kwe-1789
Ukuzamazama komhlaba okukhulu kweTangshan ka-1976
I-Admiral Hayreddin Barbarossa
Iinkokheli zamaRoma ekupheleni kweRiphabliki: Marius
I-Valkyrie: Inkqubo yeBhomu ye-Julayi yokubulala uHitler
UMbusi uHerhito waseJapan
IHoratio Hornblower - Ngowuphi umyalelo omele ufunde iiNveveli?
IiVikings - Ingqwalasela
Ukusebenzisa iMimandla yesiJamani kwiKlasi yaseJamani
Uluntu lwabantu base-United States
Iingoma eziphezulu zeSty yee-80s
Lezi Joks ezingama-30 ze-ROFL zikaSteven Wright zi-Funniest Funny zi-Crazily Funny
Liyiphi iqela lovavanyo?
Uhlobo lokudlala lwasehlobo lwe-Summer
Cinga Abanye Ngcono Kunoko-Filipi 2: 3
'UMtyholi kunye noTom Walker' Abalinganiswa
Ukufundisa Iimviwo zeTekisi
Iinkcukacha zeCerium - Le okanye iNombolo ye-Atomic 58
Isibonelo sokufuduka kwe-Pacific Coast: I-Prehistoric Highway e-Amerika
Ziziphi iiNgcebiso zeFransi ezihamba kunye namazwe kunye namazwekazi?
I-Tonality kwi-Painting: Kunzima ukuyijonga kodwa ke kuyimfuneko
Iingcali eziphezulu zeBlues Modern
Uhlolo: I-Laser Stroke Pool Cue
Ukuqonda iziFundo zeeNombolo zeFrench
Iimveliso kunye neNtengo yeMerit Ukuhlawula ootitshala
IiJokes zeBrakeback Mountain